ယုတ်မာလှတဲ့ လူတွေကြောင့် ရင်ကွဲစရာဖြစ်သွားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်လေးပါ..။ - APANNPYAY
Home / ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ / ဖြစ်ရပ်မှန် / ယုတ်မာလှတဲ့ လူတွေကြောင့် ရင်ကွဲစရာဖြစ်သွားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်လေးပါ..။
ယုတ်မာလှတဲ့ လူတွေကြောင့် ရင်ကွဲစရာဖြစ်သွားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်လေးပါ..။
Apann Pyay 12:27 PM ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ , ဖြစ်ရပ်မှန် Edit
အနှီးထုပ်လေးထဲမှာ အိပ်ပျော်နေတဲ့ဒီကလေးလေးဟာ သူ့ဗိုက်ထဲကထွက်လာတာတဲ့လား..အကြိမ်ကြိမ်ဖျက်ချဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ ပျက်မကျခဲ့တဲ့ ကလေးလေးကခုတော့လည်း လူ့လောကထဲရောက်လာပြီပေါ့..
သူမယုံနိုင်ဖြစ်နေသည်..သွေးပုပ်ကျဆေးကို အရက်နဲ့အကြိမ်ကြိမ်သောက်ခဲ့တဲ့ဒဏ်ကြောင့် ခေါင်းမှာဆံပင်လေးတွေ ပါးကျဲကျဲဖြစ်နေတာကလွဲလို့ကလေးလေးက ကျန်းမာပြီး ထွားလိုက်တာ..
ဘေးနားကုတင်က လူနာအမျိုးသမီးကြီးနဲ့တခြားလူတွေ တိုးတိုး တိုးတိုးပြောနေသံဟာတိုက်နယ်ဆေးရုံလေးရဲ့ ပူးပူးကပ်ကပ်ကုတင်တွေကြားသူ အကျယ်ကြီးကြားနေရပါသည်..
“ကလေးအမေက ငယ်ငယ်လေးပါလား””၁၃ နှစ်ပဲရှိသေးတယ်တဲ့””ဒါဆို အသက် ၁၂ နှစ်လောက်ထည်းက ဗိုက်ကြီးတာပေါ့””လင်ကောင်မပေါ်ဘဲမွေးတာတဲ့””သူ့လင်က ထောင်ကျနေတယ်လဲပြောတယ်””ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ သနားပါတယ်””နန့်တာလည်းပါမှာပေါ့အေ..”
အကြိမ်ပေါင်းများစွာကြားဖူးနေကျစကားသံတွေ..ဘယ်နှစ်ခါကြားကြား ရင်ထဲမှာ နာကျင်ရစမြဲ..ကိုယ်ဝန် ၇ လ ဗိုက်လေးပူလာထည်းက ကြားလာရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်က ကဲ့ရဲ့သံတွေ ၊ သူ့ကို စက်ဆုတ်သလိုကြည့်တဲ့အကြည့်တွေ ၊တဖြည်းဖြည်းနဲ့ စွန့်ခွာသွားတဲ့ ကစားဖော် သူငယ်ချင်းတွေ ၊သူဘာမှားခဲ့လို့လဲ သူဘာများမှားခဲ့လို့လဲဟင်…
သူ့ရင်ခွင်ထဲမှာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်နေတဲ့ဒီကလေးလေးရဲ့ ပါးရဲရဲလေးကိုကိုင်ပြီး “မောင်လေးရေ”လို့ခေါ်လိုက်တော့သူနာပြုဆရာမကြီးက”ဒါမောင်လေး မဟုတ်ဘူးလေသမီးရဲ့..ဒါသမီးရဲ့ သားလေးလေ ..သားလို့ခေါ်ရမယ်” ဟုပြောသည်..(အို..သားတဲ့လား..မခေါ်ရဲပါဘူးရှင်…)
ညရောက်တော့ အမေရောက်လာပါသည်..အမေတစ်ခု သမီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ သူတို့ဘဝမှာ အမေကသူများအိမ်မှာ နေ့ခင်းဘက် ထမင်းချက် အဝတ်လျော်လုပ်လို့ သူ ကလေးမွေးတာတောင်မှ ဆေးရုံကိုချက်ခြင်းမလာနိုင်ပါ.
လူရောစိတ်ပါနွမ်းနယ်နေတဲ့အမေဟာ ကလေးကိုတစ်ချက်ပဲကြည့်ပြီးသူ့ကို သက်သာရဲ့လားဟု အေးစက်စက်နဲ့စကားပြောသည်..(ကလေးမွေးထားတဲ့ ဒဏ်ရာကသက်သာပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ နာကျင်လှတယ်အမေ…)
အမေက သူ့အတွက်ထမင်းချိုင့်ထဲက ငါးခြောက်ဖုတ်နဲ့ ထမင်းကိုပန်းကန်ထဲပြောင်းထည့်နေရင်းက”ဆေးရုံကဆင်းတာနဲ့ ဒီကလေးကို သူများကိုပေးပြစ်ရမယ်..”ဟုပြောရင်း အမေငိုပါတော့သည်.
အမေငိုတော့ သူလည်းငိုချင်သည်..ဒါပေမဲ့ မျက်ရည်ကထွက်မလာ..လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ လ လုံးလုံးငိုကြွေးလာတဲ့ ဒီမျက်လုံးထဲ မျက်ရည်တွေလည်း ခမ်းပြီထင်ပါရဲ့..
လှုပ်လှုပ်ရွရွအသံများကြောင့် အိပ်နေသောကလေးလေးတအဲ့အဲ့ ဖြင့်နိုးလာသည်..စပ်စုနေသောမျက်လုံးပေါင်းများစွာတို့ကိုဥပက္ခာပြုရင်း ကလေးလေးကို နို့တိုက်ဖို့ သူကြိုးစားရအုံးမည်..
သူ့ရင်သားဆီမှ ထွက်လာသော နို့ရည်များကိုကလေးလေးက အငမ်းမရစို့လိုက်ချိန်မှာတော့သူ့ရင်ထဲလှိုက်ခနဲဖြစ်သွားခဲ့သည်..အမည်မဖော်ပြနိုင်သော ပီတိတစ်မျိုး သူခံစားလိုက်ရပါသည်..
သူများတွေ ပြောပြောနေတဲ့ မိခင်မေတ္တာဆိုတာဒါမျိုးလားဟုသူ့ဥာဏ်လေးဖြင့်တွေးနေမိသည်..ကလေးလေးကို ကြည့်နေရင်း ချစ်လာသလိုပဲ..သူတိုးတိုးလေးခေါ်လိုက်သည်..”မောင်လေး..ရေ”
ဘာလိုလိုနဲ့ဆေးရုံတတ်တာ ခုဆို ၆ ရက်လောက်ရှိပြီ..ဒီနေ့တော့ မနက်ထည်းက အမေရောက်နေသည်..ခဏနေတော့ အိပ်ယာလိပ်တွေနဲ့ နွမ်းဖတ်ဖတ် အဝတ်အစားအနည်းငယ်ကို သိမ်းဆည်းပြီးသူတို့ဆေးရုံကဆင်းရပြီ..
ဆေးရုံကဆင်းဆင်းခြင်း အမေအိမ်သို့တန်းမပြန်ပါ..ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီနှစ်စီးငှါးပြီး သူတို့မြို့နှင့်အနည်းငယ်မျှသာဝေးသောYGW ဟုခေါ်သည့်မိဘမဲ့ကျောင်းတစ်ခုသို့ သွားသည်..အဆောက်အဦးထဲဝင်ဝင်ခြင်း ကလေးတွေအများကြီးကိုတွေ့ရပါသည်..
ဘုန်းဘုန်းတစ်ပါးထွက်လာသည်..အမေနဲ့စကားတွေ အများကြီးပြောကြပြီးမှသူ့လက်ထဲက ကလေးလေးကိုလှမ်းချီကာ”ချစ်စရာလေးပါလားကွယ်..ဒုက္ခ ဒုက္ခ ဒုက္ခ..အင်း..ဘုန်းဘုန်းတို့စောင့်ရှောက်ပေးပါ့မယ်..
ကလေးအဖေကလည်းထောင်ကျနေတာဆိုတော့တကယ်လို့ထောင်ကလွတ်လာရင်ကလေးကို လာပြန်တောင်းမှာလား ကွယ်”ဟုမေးသည်..အမေက ငိုပါသည်..ရှိုက်ကာ ရှိုက်ကာငိုသောကြောင့်အမေ့ခန္ဓာကိုယ်သည် တုန်ရီနေပါသည်..
“အမလေး ဥူးဇင်းဘုရား..ဒီကောင်က ထောင်ကလွတ်လာလည်းကျမသမီးလေးဆီကို ပြန်လာမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဘုရား..သူထောင်ကျတာ မုဒိန်းမှုနဲ့ကျတာပါဘုရား.ကျမရဲ့ဟောဒီ အသက် ၁၂ နှစ်သမီးလေးလယ်ထဲမှာငါးမျှားနေတုန်း စော်ကားလိုက်လို့ သက်ငယ်မုဒိန်းမှုနဲ့ထောင်ကျသွားတာပါ..
ကျမသမီးလေးခမျာ ဒီအဖြစ်ဆိုးကြောင့်ကိုယ်ဝန်ရသွားပြီး လင်ကောင်မပေါ်ဘဲ ကလေးမွေးလိုက်ရတာပါ ဘုရား…အီးဟီးဟီး..အမလေး ဘယ်လိုအကုသိုလ်ကြောင့် ကျမသမီးလေး အဖြစ်က ဒီလောက်ဆိုးရတာတုန်း.”
“အော်..ကံကြမ္မာဆိုးလိ်ုက်တာ ဒကာမလေးရယ်..အင်းအင်း..ထားခဲ့ ထားခဲ့ ..ဒီကလေးကို လူတစ်လုံး သူတစ်လုံး ပညာတတ်ဖြစ်အောင်ဥူးဇင်းစောင့်ရှောက်ပါ့မယ်..”
အိုး….ကလေးလေးကို သူထားခဲ့ရတော့မှာပါလား..ဟင့်အင်း မထားခဲ့နိုင်ပါဘူး လို့ ပြောချင်ပေမဲ့စကားလုံးက
ထွက်မလာခဲ့..ဘုန်းဘုန်းလက်ထဲမှာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်နေတဲ့ ကလေးလေးနိုးလာလို့ သူ့ကိုမတွေ့ရင်
ကလေးလေးကြီးလာရင် သူနဲ့ကစားရအုံးမှာ..ဟုတ်တယ်..ကလေးလေးကို သူမခွဲနိုင်ပါဘူး..သူ့ရင်ထဲမှာ အတွေးပေါင်းများစွာနဲ့ ရှုပ်ထွေးနေချိန်မှာပဲအမေက သူ့လက်ကိုဆွဲပြီး ပြန်ဖို့ပြင်လိုက်သည်..
ဘုန်းဘုန်းကလည်း ကလေးလေးကိုချီပြီး လှည့်ထွက်သွားချိန်မှာတော့ ကလေးလေးရဲ့အူဝဲ အူဝဲဆိုတဲ့ ငိုသံစူးစူးလေးထွက်လာပါတော့သည်..ထိုငိုသံလေးသည်သူ့ရင်တွေ တစ်စစီကြေမွသွားသလို ခံစားရစေပါသည်..
တစ်တောက်တောက်နှင့် သက်နေသော သူ့ရင်နှစ်မွှာမှ နို့ရည်များနှင့်အတူ သူ့မျက်လုံးမှမျက်ရည်များမှာပေါက်ခနဲ ပေါက်ခနဲကျလာပါတော့သည်..လှမ်းလုဆဲဆဲခြေလှမ်းကိုရပ်ပြီး သူသည်ကလေးလေးရှိရာသို့ လှမ်းကြည့်ကာဆို့နင့်လွန်းသောအသံဖြင့်”သားလေးရေ..အမေ့ သားလေးရဲ့”ဟုနာကျင်စွာ ခေါ်လိုက်ပါတော့သည်..
Credit to SoeHtike
အနှီးထုပျလေးထဲမှာ အိပျပြျောနတေဲ့ဒီကလေးလေးဟာ သူ့ဗိုကျထဲကထှကျလာတာတဲ့လား..အကွိမျကွိမျဖကျြခဖြို့ကွိုးစားခဲ့ပမေဲ့ ပကျြမကခြဲ့တဲ့ ကလေးလေးကခုတော့လညျး လူ့လောကထဲရောကျလာပွီပေါ့..
သူမယုံနိုငျဖွဈနသေညျ..သှေးပုပျကဆြေးကို အရကျနဲ့အကွိမျကွိမျသောကျခဲ့တဲ့ဒဏျကွောငျ့ ခေါငျးမှာဆံပငျလေးတှေ ပါးကြဲကြဲဖွဈနတောကလှဲလို့ကလေးလေးက ကနျြးမာပွီး ထှားလိုကျတာ..
ဘေးနားကုတငျက လူနာအမြိုးသမီးကွီးနဲ့တခွားလူတှေ တိုးတိုး တိုးတိုးပွောနသေံဟာတိုကျနယျဆေးရုံလေးရဲ့ ပူးပူးကပျကပျကုတငျတှကွေားသူ အကယျြကွီးကွားနရေပါသညျ..
“ကလေးအမကေ ငယျငယျလေးပါလား””၁၃ နှဈပဲရှိသေးတယျတဲ့””ဒါဆို အသကျ ၁၂ နှဈလောကျထညျးက ဗိုကျကွီးတာပေါ့””လငျကောငျမပျေါဘဲမှေးတာတဲ့””သူ့လငျက ထောငျကနြတေယျလဲပွောတယျ””ငယျငယျရှယျရှယျနဲ့ သနားပါတယျ””နနျ့တာလညျးပါမှာပေါ့အေ..”
အကွိမျပေါငျးမြားစှာကွားဖူးနကေစြကားသံတှေ..ဘယျနှဈခါကွားကွား ရငျထဲမှာ နာကငျြရစမွဲ..ကိုယျဝနျ ၇ လ ဗိုကျလေးပူလာထညျးက ကွားလာရတဲ့ပတျဝနျးကငျြက ကဲ့ရဲ့သံတှေ ၊ သူ့ကို စကျဆုတျသလိုကွညျ့တဲ့အကွညျ့တှေ ၊တဖွညျးဖွညျးနဲ့ စှနျ့ခှာသှားတဲ့ ကစားဖျော သူငယျခငျြးတှေ ၊သူဘာမှားခဲ့လို့လဲ သူဘာမြားမှားခဲ့လို့လဲဟငျ…
သူ့ရငျခှငျထဲမှာ နှဈနှဈခွိုကျခွိုကျအိပျပြျောနတေဲ့ဒီကလေးလေးရဲ့ ပါးရဲရဲလေးကိုကိုငျပွီး “မောငျလေးရေ”လို့ချေါလိုကျတော့သူနာပွုဆရာမကွီးက”ဒါမောငျလေး မဟုတျဘူးလသေမီးရဲ့..ဒါသမီးရဲ့ သားလေးလေ ..သားလို့ချေါရမယျ” ဟုပွောသညျ..(အို..သားတဲ့လား..မချေါရဲပါဘူးရှငျ…)
ညရောကျတော့ အမရေောကျလာပါသညျ..အမတေဈခု သမီးတဈခုဖွဈတဲ့ သူတို့ဘဝမှာ အမကေသူမြားအိမျမှာ နခေ့ငျးဘကျ ထမငျးခကျြ အဝတျလြျောလုပျလို့ သူ ကလေးမှေးတာတောငျမှ ဆေးရုံကိုခကျြခွငျးမလာနိုငျပါ.
လူရောစိတျပါနှမျးနယျနတေဲ့အမဟော ကလေးကိုတဈခကျြပဲကွညျ့ပွီးသူ့ကို သကျသာရဲ့လားဟု အေးစကျစကျနဲ့စကားပွောသညျ..(ကလေးမှေးထားတဲ့ ဒဏျရာကသကျသာပမေဲ့စိတျထဲမှာတော့ နာကငျြလှတယျအမေ…)
အမကေ သူ့အတှကျထမငျးခြိုငျ့ထဲက ငါးခွောကျဖုတျနဲ့ ထမငျးကိုပနျးကနျထဲပွောငျးထညျ့နရေငျးက”ဆေးရုံကဆငျးတာနဲ့ ဒီကလေးကို သူမြားကိုပေးပွဈရမယျ..”ဟုပွောရငျး အမငေိုပါတော့သညျ.
အမငေိုတော့ သူလညျးငိုခငျြသညျ..ဒါပမေဲ့ မကျြရညျကထှကျမလာ..လှနျခဲ့တဲ့ ၁၀ လ လုံးလုံးငိုကွှေးလာတဲ့ ဒီမကျြလုံးထဲ မကျြရညျတှလေညျး ခမျးပွီထငျပါရဲ့..
လှုပျလှုပျရှရှအသံမြားကွောငျ့ အိပျနသေောကလေးလေးတအဲ့အဲ့ ဖွငျ့နိုးလာသညျ..စပျစုနသေောမကျြလုံးပေါငျးမြားစှာတို့ကိုဥပက်ခာပွုရငျး ကလေးလေးကို နို့တိုကျဖို့ သူကွိုးစားရအုံးမညျ..
သူ့ရငျသားဆီမှ ထှကျလာသော နို့ရညျမြားကိုကလေးလေးက အငမျးမရစို့လိုကျခြိနျမှာတော့သူ့ရငျထဲလှိုကျခနဲဖွဈသှားခဲ့သညျ..အမညျမဖျောပွနိုငျသော ပီတိတဈမြိုး သူခံစားလိုကျရပါသညျ..
သူမြားတှေ ပွောပွောနတေဲ့ မိခငျမတ်ေတာဆိုတာဒါမြိုးလားဟုသူ့ဉာဏျလေးဖွငျ့တှေးနမေိသညျ..ကလေးလေးကို ကွညျ့နရေငျး ခဈြလာသလိုပဲ..သူတိုးတိုးလေးချေါလိုကျသညျ..”မောငျလေး..ရေ”
ဘာလိုလိုနဲ့ဆေးရုံတတျတာ ခုဆို ၆ ရကျလောကျရှိပွီ..ဒီနတေ့ော့ မနကျထညျးက အမရေောကျနသေညျ..ခဏနတေော့ အိပျယာလိပျတှနေဲ့ နှမျးဖတျဖတျ အဝတျအစားအနညျးငယျကို သိမျးဆညျးပွီးသူတို့ဆေးရုံကဆငျးရပွီ..
ဆေးရုံကဆငျးဆငျးခွငျး အမအေိမျသို့တနျးမပွနျပါ..ဆိုငျကယျကယျရီနှဈစီးငှါးပွီး သူတို့မွို့နှငျ့အနညျးငယျမြှသာဝေးသောYGW ဟုချေါသညျ့မိဘမဲ့ကြောငျးတဈခုသို့ သှားသညျ..အဆောကျအဦးထဲဝငျဝငျခွငျး ကလေးတှအေမြားကွီးကိုတှရေ့ပါသညျ..
ဘုနျးဘုနျးတဈပါးထှကျလာသညျ..အမနေဲ့စကားတှေ အမြားကွီးပွောကွပွီးမှသူ့လကျထဲက ကလေးလေးကိုလှမျးခြီကာ”ခဈြစရာလေးပါလားကှယျ..ဒုက်ခ ဒုက်ခ ဒုက်ခ..အငျး..ဘုနျးဘုနျးတို့စောငျ့ရှောကျပေးပါ့မယျ..
ကလေးအဖကေလညျးထောငျကနြတောဆိုတော့တကယျလို့ထောငျကလှတျလာရငျကလေးကို လာပွနျတောငျးမှာလား ကှယျ”ဟုမေးသညျ..အမကေ ငိုပါသညျ..ရှိုကျကာ ရှိုကျကာငိုသောကွောငျ့အမခေ့န်ဓာကိုယျသညျ တုနျရီနပေါသညျ..
“အမလေး ဥူးဇငျးဘုရား..ဒီကောငျက ထောငျကလှတျလာလညျးကမြသမီးလေးဆီကို ပွနျလာမှာမဟုတျတော့ပါဘူးဘုရား..သူထောငျကတြာ မုဒိနျးမှုနဲ့ကတြာပါဘုရား.ကမြရဲ့ဟောဒီ အသကျ ၁၂ နှဈသမီးလေးလယျထဲမှာငါးမြှားနတေုနျး စျောကားလိုကျလို့ သကျငယျမုဒိနျးမှုနဲ့ထောငျကသြှားတာပါ..
ကမြသမီးလေးခမြာ ဒီအဖွဈဆိုးကွောငျ့ကိုယျဝနျရသှားပွီး လငျကောငျမပျေါဘဲ ကလေးမှေးလိုကျရတာပါ ဘုရား…အီးဟီးဟီး..အမလေး ဘယျလိုအကုသိုလျကွောငျ့ ကမြသမီးလေး အဖွဈက ဒီလောကျဆိုးရတာတုနျး.”
“အျော..ကံကွမ်မာဆိုးလျိုကျတာ ဒကာမလေးရယျ..အငျးအငျး..ထားခဲ့ ထားခဲ့ ..ဒီကလေးကို လူတဈလုံး သူတဈလုံး ပညာတတျဖွဈအောငျဥူးဇငျးစောငျ့ရှောကျပါ့မယျ..”
အိုး….ကလေးလေးကို သူထားခဲ့ရတော့မှာပါလား..ဟငျ့အငျး မထားခဲ့နိုငျပါဘူး လို့ ပွောခငျြပမေဲ့စကားလုံးက
ထှကျမလာခဲ့..ဘုနျးဘုနျးလကျထဲမှာ နှဈနှဈခွိုကျခွိုကျအိပျပြျောနတေဲ့ ကလေးလေးနိုးလာလို့ သူ့ကိုမတှရေ့ငျ
ကလေးလေးကွီးလာရငျ သူနဲ့ကစားရအုံးမှာ..ဟုတျတယျ..ကလေးလေးကို သူမခှဲနိုငျပါဘူး..သူ့ရငျထဲမှာ အတှေးပေါငျးမြားစှာနဲ့ ရှုပျထှေးနခြေိနျမှာပဲအမကေ သူ့လကျကိုဆှဲပွီး ပွနျဖို့ပွငျလျိုကျသညျ..
ဘုနျးဘုနျးကလညျး ကလေးလေးကိုခြီပွီး လှညျ့ထှကျသှားခြိနျမှာတော့ ကလေးလေးရဲ့အူဝဲ အူဝဲဆိုတဲ့ ငိုသံစူးစူးလေးထှကျလာပါတော့သညျ..ထိုငိုသံလေးသညျသူ့ရငျတှေ တဈစစီကွမှေသှားသလို ခံစားရစပေါသညျ..
တဈတောကျတောကျနှငျ့ သကျနသေော သူ့ရငျနှဈမှာမှ နို့ရညျမြားနှငျ့အတူ သူ့မကျြလုံးမှမကျြရညျမြားမှာပေါကျခနဲ ပေါကျခနဲကလြာပါတော့သညျ..လှမျးလုဆဲဆဲခွလှေမျးကိုရပျပွီး သူသညျကလေးလေးရှိရာသို့ လှမျးကွညျ့ကာဆို့နငျ့လှနျးသောအသံဖွငျ့”သားလေးရေ..အမေ့ သားလေးရဲ့”ဟုနာကငျြစှာ ချေါလိုကျပါတော့သညျ..